XOG:- Alshabaab waxay doonayaan Dhaqaale si ay usii daayeen Shaqaale udhashay Cuba oo ay kasoo qafaasheen Kenya.
May 16, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 3
Sida uu daabacay wargayska Kenya kasoo baxa ee Daily Nation dagaalamyaasha al-Shabaab ayaa madax furasho ku dalbaday sii deenta dhaqaatiir u dhashay dalka Cuba kuwaas oo ay al-Shabaab bishii tagtay kasoo qafaasheen gudaha dalka Kenya.
Madaxa furashada ay dagaalamyaasha Al-Shabaab dalbadeen ayaa gaarayso Sh150 milyan oo shilin lacagta Kenya sida ay sheegeen Ergo goor sii horeesay loo xil saaray wada xaajoodka al-Shabaab ee lagu sii deenayo dhaqaatiirtan.
Odayaasha dhaqan ee wadahadalka loogu diray al-Shabaab ayaa ka ruqaansaday degmooyinka Mandera iyo Balad-Xaawo iyagoona gaaray deegaano u dhaxeeya Buale iyo Ceel-Cade halkaasi oo ay kula kulmeen saraakiil katirsan al-Shabaab.
Odayaashan dhaqan ayaa sidookale xaqiijiyay in labadan dhaqtar oo u kasoo wada jeeda dalka Cuba ay haatan nool yihiin xaaladooda caafimaadna ay aad u wanaagsantahy waxa ayna haatan ku suganyihiin deegaanada ay al-Shabaab maamulaan.
Weerarka ay Al-Shabaab kusoo qafaasheen dhaqaatiirtan ayaa dhacay 12’kii bishii April ee inadhaaftay iyagoona waqtigaasi sidookale dilay askari ilaala u haa dhaqaatiirtan.
ila ma aha iney madaxfurasho qaadanayaan ee duqaynta cirka ha idinka yaraato weeye ujeedkoodu sida ay ila tahay
Thank you for the information that can make many new things. It’s the most amazing knowledge, the best with this new knowledge.